Ikhaya elihle eGlowczyce elineWiFi kunye namagumbi okulala ama-2
Eli khaya likhululekile kwaye lanamhlanje leholide likwilali yase-Izbica.
Le ndlu imi kwinduli ephakathi kwamasimi kunye nemithi ekufuphi nechibi laseLebsko. Yinto enclave yeentaka zasendle. Ukusuka echibini ungabuka iindunduma zesanti kunye nesanti ekhawulezayo. Indawo entle kakhulu kwaye ezolileyo. Izibonelelo kwikhaya leeholide ziyasebenza kwaye zinencasa. I-sauna eqhelekileyo kwipropati. Abantwana banezinto zokudlala ezininzi ezikhoyo. Iparadesi yokwenyani yabalobi kunye nendawo efanelekileyo yentsapho.
Kwiploti ekwabelwana ngayo nayo i-PPO517.
Eli khaya likhululekile kwaye lanamhlanje leholide likwilali yase-Izbica. Le ndlu imi kwinduli ephakathi kwamasimi kunye nemithi ekufuphi nechibi laseLebsko. Yinto enclave yeentaka zasendle. Ukusuka echibini ungabuka iindunduma zesanti kunye nesanti ekhawulezayo. Indawo entle kakhulu kwaye ezolileyo. Izibonelelo kwikhaya leeholide ziyasebenza kwaye zinencasa. I-sauna eqhelekileyo kwipropati. Abantwana banezinto zokudlala ezininzi ezikhoyo. YiParadesi leyo yokuloba. Yindawo efanelekileyo yosapho. Kwisakhiwo esiqhelekileyo kwakhona PPO518.
Imigama: ithuba lokuloba 300 m / ukuthenga 300 m / yokutyela 300 m / isixeko esikufutshane (Glowczyce) 9 km / amanzi (Lake) 300 m